Amin'ity fampiharana ity dia hanatsara ny feon'ny telefaoninao na ny takelaka | Androidsis
Raha tsy fantatrao izy, Wavelet dia fampiharana ahafahanao manatsara ny feo multimedia an'ny findainao Android. Azonao atao ny manao azy ho azy, satria izy io dia rindrambaiko mifanentana amina headphone efa ho 2.000 na tanana, mba hahafahanao manamboatra ny takelaka fihainoana araka ny itiavanao azy.
Ny ankabeazan'ny finday dia manaraka fenitra miaraka amina toe-javatra hanamboarana ny feo ho an'ny tsiron'ny mpampiasa, fa amin'ny ankapobeny, tsy ampy izany, na tsy afaka manamboatra ny feo araka ny tokony ho izy. Io no nahatonga ilay fampitahana Wavelets, fampiharana vaovao mampanantena ny hanatsara ny feo mandeha ho azy arakaraka ny maodelin'ny telefaona. Saingy misy bebe kokoa, misy koa ny fametrahana safidy maro ahafahanao manamboatra tanteraka ny audio multimedia amin'ny finday avo lenta.
Ity rindrambaiko ity dia misy rindrambaiko mihoatra ny 2.000
Wavelet dia manolotra anao fomba maro isan-karazany hanamboarana ny feonao multimedia. Manana eo am-pelatananao a graphic equalizer 9-band miaraka amina preset hatreo amin'ny fahaizana manamboatra tombony na fanamafisana ny bas. Fa ny tena nahasarika ny saina indrindra dia ny fampidirana ny AutoEq, tetikasan'i Jaakko Pasanen, izay manangona ny fanitsiana matetika ny maodely headphone efa ho 2.000. Amin'izany no nanomezanao antoka ny valiny tsara indrindra amin'ny fampifandraisana azy ireo amin'ny fitaovanao, satria ny maodely ihany no mila safidinao. Ary koa, ny valiny dia azo ahitsy arakaraka ny ifandraisan'izy ireo amin'ny telefaona amin'ny alàlan'ny telegrama na amin'ny Bluetooth.
Wavelet dia miasa any aoriana, ary mamantatra ireo seho am-peo izay sokafan'ny fampiharana mozika malaza indrindra. Ohatra iray amin'ny fomba fiasan'ny Wavelet, ity mihetsika ho azy rehefa milalao mozika avy amin'ny Spotify na Youtube ianao. Raha vantany vao mametraka hira ianao ho an'ny fanamafisam-peo hanomboka hiasa. Raha toa ka tsy eken'ny fampiharana izany dia ampidirina ny fomba 'Legacy' hahafahana manery ny valin'ny fangatahana.
Aorian'ny fitsapana ity rindrambaiko ity dia tsy maintsy ekena fa tena tsara ny valiny atolotray. Ankoatry ny fananana preselection misy, Wavelet dia misy fanatsarana azo alaina rehefa mampifandray ny headphones anao amin'ny tariby ianao, tsy misy tariby ary na dia esorina amin'ny fanaingoana tsirairay aza ny fanafoanana tabataba Ary izany rehetra izany mba hahazoana fanatsarana feo izay tena marina.
ny Fitaovana Wavelet mandeha ho azy Izy ireo dia feno miaraka amina sehatr'asa sasany izay navadika taorian'ny fividianana ao anaty ny app ho an'ny 4,99 euro fotsiny. Madio tokoa ny interface aminy, tsy misy doka ary mamoaka kalitao tsara izy, ampy antony hanandramana azy.
Wavelet: headphone manokana EQ
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Hatsarao ny feon-telefaoninao amin'ity fampiharana tsotra ity
Ahoana ny fomba hanafoanana ny toerana fitahirizana amin'ny Telegram